8 तपाईं यात्रा गर्नु हुँदैन सडकको लागि एक युगल
प्राय: यात्रा म्याग्दी, ब्लगहरू, र अनुभवी सेलिब्रेटी लेखकहरूले तपाईंलाई चीजहरूको बारेमा बताउनेछन् गर्नुपर्छ जब तपाईं यात्रा गर्नुहुन्छ। उनीहरूले तपाईंलाई कसरी बताउनेछन् कि प्याक, कहाँ रहन, र उत्कृष्ट अनुभवको लागि के गर्न आदेश दिन्छ, र आशा छ कि आफैले आफैं स्थानीयहरुलाई पनि प्रिय पार्दछ। यद्यपि, हामीले पत्ता लगाएका थियौँ कि कुनै पर्यटक भन्दा छिमेकी पर्यटकको छुट्टी चाँडै के छैन, र तिनीहरूले गरेनन्, र वास्तवमा तिनीहरूले गरे, तर वास्तवमा विपरीत।
धेरै यात्रा राम्रोसँग बुझ्ने व्यवहारहरू तपाईबाट टाढा जान्नुहुन्छ। किन? किनकी यो वास्तवमा तपाईसँग भएको अनुभवको सन्दर्भमा एकदम अधिक विस्तृत दृष्टिकोण हो। मलाई विश्वास नगर्ने? यो तरिका सोच्नुहोस् - छुट्टीमा आफ्नो "गर्न" सूची संग तपाईं के गर्नुहुन्छ?
तपाइँ त्यो सूची गर्नुहुन्छ।
कहिलेकाहीँ, मात्र त्यो सूची।
नतिजा अनुभव एक सीमित छ, जहाँ यहाँ एक खराब ब्रेक, वा असफल असफल भ्रमण त्यहाँ यात्राको लागि आपत्तिजनक हिज्जे गर्दछ। यसबाहेक, यदि तपाईंले दस चीजहरूको सूची बन्द गरिरहनुभएको छ भने, कहिलेकाहीँ ती वास्तवमा चीजहरू जुन तपाईले गर्नु पर्छ। सबैभन्दा लोकप्रिय? पक्कै पनि। के यो तपाईंलाई सम्भव छ? सम्भव छैन।
निष्पक्ष हुन, हामीले हाम्रो उचित साझेदारी "यो गरौं, यो नगर्नुहोस्" लेखका प्रकारहरू। तिनीहरू सहयोगी छन्, र उनीहरूले हामीलाई साँच्चै मायालु विशिष्ट ठाउँहरूमा विशेष चीजहरू लेख्ने मौका दिन्छ। तर, पाठक र यात्रीको रूपमा, आफैलाई यी कुराहरूमा नबिर्सनुहोस्।
बाहिर जानुहोस्। अन्वेषण गर्नुहोस्।
त्यसोभए, तपाइँ के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा किन बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ? किनकि तपाइँलाई भन्दा धेरै (कानुनी) चीजहरूलाई बाहिरको खेललाई राम्ररी विचार गर्नु पर्दछ! केहि फरक पार्नुहोस्, चम्किलो हुनुहोस्। तपाई त्यसो गर्न सक्नुहुनेछ कि हामी कुन विरोधीलाई कल गर्न सक्छौं। हामी तपाइँलाई यो पोस्टमा के गर्ने भनेर बताइरहेका छौं, तर के गर्नु हुँदैन। त्यहाँबाट, यो तपाईं माथि छ रेखाहरू बाहिर रंग गर्न।
आफैलाई ध्यान दिनुहोस्
यो साँच्चै आधारभूत छ। यदि तपाईं उच्च स्वर, अहंकार, वा विदेशबाट ध्यान खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यो लगभग कहिल्यै राम्रो हुँदैन। तपाईंको प्रयोजन विदेशमा उत्कृष्ट अनुभव हुनु हो, हो, तर अरूको लागि यसलाई पछाडि बिना यो गर्न। अरू कसैको खुट्टामा चल्दैन, शाब्दिक वा उल्टो रूप देखि। सामानको दाबीमा आफ्नो अहंकार जाँच गर्नुहोस्, किनकि तपाईंको ध्यान गन्तव्यमा हुनुपर्दछ, वरपर अर्को बाटो होइन।
मुद्रा खरिद गर्नुहोस्
म "मुद्रा खरीद" को अर्थमा हवाई अड्डामा एक्सचेन्ज गर्न एक्सचेन्ज सन्झ्याल वा डेस्क प्रयोग गरिरहेको छु। तपाईले तिर्नु पर्ने दरहरू अक्सर वास्तविक विनिमय कुन दुई पटक हुन् - अन्य शब्दहरुमा, यो एक पूर्ण रिप बन्द हो।
बरु, एटीएमहरू विदेशमा प्रयोग गर्नुहोस्। चार्ज शुल्क कम से कम छ, र तपाईं वास्तव मा बनाउन को लागी लेनदेन को राशि नियंत्रित गर्न सक्छन् (र यसैले, तपाईं कितने शुल्क उठाउछन)।
एक पेय वा खाना खोल्नुहोस्
यो मतलब छैन एक यात्रा मूर्ख मूर्ख जस्तै, तर आतिथ्य को स्वीकार गर्न मा एक पाठ हो।
यदि स्थानीय प्रस्तावले तपाइँलाई खाना वा पेय प्रदान गर्दछ भने, जबसम्म तपाईले केहि कारणले तपाईंको सुरक्षाको डर नदिनु हुन्छ भने स्वीकार गर्नुहोस्। यो सांस्कृतिक रूपमा प्रियंका हो। यो विशेष गरी कुनै व्यक्तिको घरमा छ, किनकि धेरै देशहरूमा यस्तो प्रस्तावको अस्वीकार अशिष्ट र अपमानजनक मानिन्छ।
हामी के मतलब छैन यहाँ एक पट्टीमा हरेक खुला-फ्याट पेन्टर स्वीकार गर्न हो - छैन। यो विशेष रूपमा एक होस्ट द्वारा दिइएको प्रस्तावमा पर्दछ। यदि कसैले आफ्नै हातमा एक पकवान बनायो भने, भित्तामा तपाईंले कहिल्यै खाएको कहिल्यै नभई केहि चीज पनि गर्नुभयो र तपाईलाई अचम्मको रूपमा आक्रमण गर्दछन्, तपाईले प्रत्येक प्रयासलाई बाध्य पार्नु पर्छ (कुनै पनि एलर्जीलाई बाधा पुर्याउनु पर्छ)।
ट्याक्सी लिनुहोस् (विशेष गरी)
एक टैक्सी मा एक पर्यटक कदम को रूप मा, तपाईं पनि एक टी शर्ट पहना एक विशाल बुल - आँखा मा हुन सक्छ। तपाईं अझ धेरै भन्दा बढी शहर जान्नुहुन्छ र एक दिशा जान्नुहुन्छ भन्दा बढी प्रत्याशित हुने सम्भव छ, तर त्यहाँ त्यहाँ पुग्नको लागि सवारी चाहिन्छ।
ट्याक्सहरू सुविधाजनक हुन सक्छन्, तर तपाईंले तिनीहरूलाई दुबारा गर्नुपर्दैन। वास्तवमा, कुनै पनि समय सार्वजनिक यातायात मेट्रो प्रणालीको रूपमा एक विकल्प हो, ट्याक्सीमा छान्नुहोस्। कारण सरल छन् - तपाई सामान्यतया सुरक्षित हुनुहुन्छ, र लागत ट्याक्सीको अंश मात्र हो।
स्थानीय यातायातको सन्दर्भमा यात्रा गर्नु अघि अनुसन्धान गर्नुहोस्, र यो पूर्णतया मात्र ट्याक्सी प्रयोग गरेर प्रयास गर्नुहोस्।
"नमस्कार", "कृपया", र "धन्यवाद" जान्न बिर्सनुहोस्
तपाईं कुन यात्रामा कुन देशमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, वास्तवमा कसरी "हेलो", "कृपया", र "होस्ट" होस्ट भाषामा कसरी भन्न सिक्ने असफल भएको बहाना छ।
यो 20 सेकेन्डको बारेमा जान्न सकिन्छ, अर्को मिनेटमा याद गरिएको छ, र वास्तवमा कुनै पनि देशमा तपाईलाई बुझ्न कसरी सुधार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो धेरै जान्न को लागि डेम खर्च गर्दैन, र समय को लागी केहि केहि छैन पछि। यदि तपाइँसँग Google Translate एप डाउनलोड गर्ने क्षमता छ भने, वा तपाइँको फोनमा वेबसाइट खिच्न सक्नुहुन्छ, तपाईंले टिभी व्यापारिक ब्रेकको अवधिमा कुनै पनि भाषामा3शब्दहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। केहि अझ बढी चाहियो? हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्छ कि सानो मार्गदर्शक ह्यान्डल को ठेगाना छ तपाईंको अर्को यात्राको लागि एक भाषा कसरी बोल्ने जान्नुहोस्!
हुनसक्छ कि तपाईं होस्ट भाषामा सबै भन्न सक्नुहुनेछ, तर यो तपाईंले प्रमाण गर्नु भएको प्रमाण हो। यो तपाईंको प्रमाण छ कि तपाईं प्रमाण छ, र आफ्नो संस्कृति उच्च सम्मान मा राख्नुहोस्। उस्तै महत्त्वपूर्ण, तपाईं आफ्नो आफ्नै सांस्कृतिक आवश्यकताहरु मा राख्नु भएको छैन। यो अवस्था मा घुटने को एक कोमल धनु हो जहाँ त्यस्ता प्रकार धेरै उपयुक्त छ।
प्रमुख पर्यटक आकर्षण नजिकको खाई
रेस्टुरेन्टहरू जसले वर्गहरू, पियाजहरू, र शहर केन्द्रहरूलाई प्रमुख पर्यटक आकर्षणहरूको साथमा तपाईंलाई लगभग दोहोरो मूल्य खर्च गर्नेछ, र तपाइँले कहींभन्दा बढी एउटा सडक भन्दा कम गुण प्राप्त गर्नुहुनेछ। क्या यो एक ट्रान्सफर प्वाइवेयर द्वारा तपाईंको पर्यटक डलर को बाहिर siphon को लागि एक बेजोड विधि हो? होइन - यो केवल आपूर्ति र मांग हो।
धेरै मानिसहरू मनमा "सुविधा" को विचार संग यात्रा गर्छन्। यसमा चीजहरू हेर्न चाहने नजिक खाने समावेश गर्दछ। बरु, ती क्षेत्रहरूमा हेर्नुहोस् जुन "अंतर विभाजित" वर्गहरू वा शहर केन्द्रहरू बीचमा, र यहाँसम्म दोस्रो र तेस्रो सडकहरूमा। यदि सबै असफल भएमा, वर्ग बन्द गर्नुहोस् र स्थानीय पसल राख्ने ठाउँमा सोध्नुहोस् जहाँ तिनीहरू खान चाहन्छन्।
एक मूर्ख-प्रहार को राम्रो ठाउँ खोज्न को लागि खोज को तरीका चाहिए? यी तत्वहरू जोड्नुहोस्;
1. धेरै संकेतहरू अगाडि होस्ट देश भाषामा लेखिएको छ - अंग्रेजी होइन (जबसम्म देशले अंग्रेजीको धेरै बोल्दछ, निस्सन्देह)।
2. मेनू पतली हो। मोटा मेनु धेरै विकल्पहरू छन् सबैलाई अपील गर्न प्रयास गर्दै छन्, र यसरी, वास्तवमा कुनै पनि बेईमान। यी रेस्टुरेन्टहरूले कुनै पनि राम्रो काम गर्दैन, र तिनीहरू निश्चित रूपमा विशेषज्ञ छैनन्। थप रूपमा, तपाईसँग अधिक मेनु वस्तुहरू, तपाईले भान्सामा व्यवस्थापन गर्ने थप स्टक। यसले दिन को बाहिर फेंकिएको हुनुपर्छ कि केहि सेवा गरिरहेको संभावना बढ्छ। यसको सट्टा, पतली (2-4 पृष्ठहरू) मेनुसँग एक स्थान खोज्नुहोस् जुन एपटिस्टायरहरू, इन्टेन्टहरू, सलादहरू र मिठाईहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। ती किसिमका प्रतिष्ठानहरू छन् जुन तपाईले दाँया पाउनुहुनेछ।
3. यदि रेस्टुराँले पर्यटकहरू जस्तै पर्यटकहरुसँग प्याक गरिएको छ भने, चलाउनुहोस्। टाढा भाग्नुहोस्, मेरो साथी। सहि बाटोमा दाँया घुमाउनुहोस् जहाँ सबैले जस्तो देखिन्छ कि तिनीहरूले भर्खरै लामो, नीलो-कलर पारी काम गर्दथे। त्यो तपाईं चाहानुहुन्छ। यदि तपाईं एक "केटाकेटी अर्को ढोका" अमेरिकन हुनुहुन्छ भने, तपाईंले ठाउँ खोज्नु पर्दछ जहाँ तपाईं जस्तो अरू कोही खान्छौं।
4. "विशेष" को लागि नजानुहोस्। "रेस्टुरेन्ट" मा एक "विशेष" रेस्टुनी मार्की वा चालकबोर्डमा भन्नु पर्छ "माछाहरू बदलियो, त्यसोभए हामीले यसलाई एक स्टवमा फ्याँक्यौं र यसलाई #% पकायो।" यदि एक ठाउँ विशेषको गुच्छा पम्प गरिरहेको छ, टाढा टाढा वा बस मुख्य मेनु के होईन।
एक पैसा बेल्ट बिर्सनुहोस्
सुन्नुहोस्, मलाई थाहा छ कि सेक्सी छैन। तिनीहरू स्टाइलिश छैनन् तर तपाईं पैसा बेल्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पर्याप्त पतली छ कि तपाईंको लुगाफाटमा छिपाउन र तपाईंको वालेट, पासपोर्ट र नगद सुरक्षित राख्नुहोस्।
सच्चाइ हो, प्रायजसो पिकिंगले गर्दा यो एक सजिलो लक्ष्य हो। एक चोर एक बटुला छ कि सजिलै पहुँचयोग्य देख्छ, पर्यटक ध्यान दिदैन ... सजिलो पैसा। क्रोधको लागि क्रोम हुन सजिलो बनाउनुहोस्।
योजना सबै कुरा
सबै तरिकाले, तपाईंले हेर्नु भएको जस्तो महसुस गर्ने योजनाहरू योजना बनाउनुहोस्, तर तपाईको भ्रमण भन्दा बढी योजना नदिनुहोस्। प्रायश्चितताको लागि कोठा छोड्नुहोस्। दौड गर्न यात्राहरू बीचको समय छोड्नुहोस्।
चिन्ता गर्ने एक असल नियम यदि तपाईंले धेरैसँग प्याक गर्नुभएको छ भने जान्दछन् कि यदि तपाईंलाई लाग्छ कि एक बढी उत्साह जस्तो "धेरै धेरै" हुनेछ, त्यसपछि कुनै पनि तरिकालाई घटाउनुहोस्। पर्यटकहरू प्रायः सधैं आक्रामक छन्, र ट्राफिक समयहरू कम गर्नु, वास्तवमा कति लामो समयसम्म लिन्छन्, समय तिनीहरू भगाई खर्च गर्न चाहन्छन्, र कति विशाल शहरहरू साँच्चै क्षेत्रफल हुन्छन्। तपाईंले जो पनि सोच्नुभएको छ एक दिनमा पैक गर्न एकदम धेरै कुराहरू हो, कम से कम एक घटाउनुहोस्।
यस सूचीलाई नराम्रो बनाउन बिना, यी यात्राहरू यात्रा गर्ने केही कुञ्जीहरू छन् जुन तपाइँ के गर्दै हुनुहुन्छ थाहा छ, र सडकमा तपाईंको समयको आनन्दमा सहायता गर्नेछ। अत्यन्तै कममा, तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सराहनात्मक हुनुहोस्। संस्कृतिको आनन्द लिनुहोस्। मान्छेलाई नमस्कार गर्नुहोस्। आफैलाई नयाँ कुरामा बिर्सनुहोस्।
श्रेणी: प्रेरणादायक, यात्रा योजना टैग: यात्रा योजना, के गर्ने, के गर्न पैक
← नयाँ यात्रुहरूको लागि 20 युक्तिहरू
किन तपाईंले किनेसोकी, जापान भ्रमण गर्नुपर्छ →